श्रीमानकाले काम नै गर्दैन म यो जवान जीवन कसरी कटाउनु ! – Sidha Post 24
श्रीमानकाले काम नै गर्दैन म यो जवान जीवन कसरी कटाउनु !
काठमाडौं । सम्बन्ध विच्छेद गर्नका लागि धेरै कुराहरु हुन सक्छन् । अहिले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु वा जोड्ने कुरा एकदम सहज हुँदै गएको छ ।
तर नेपालजस्ता पुरुष प्रधान समाजमा महिलाहरुले आफ्नो श्रीमान छोड्न धेरै गाह्रो छ । यो बीचमा अब महिलाहरु पनि खुलेर बोलिरहेका छन् ।
केहि वर्ष पहिले गरिएको एक अध्ययनले सम्बन्ध तोड्न खोज्ने महिलाहरुका बारेमा रोचक कुरा ( husband wife divorce status ) बाहिर ल्याएको थियो ।
केहि महिलालले आफ्नो पति शारीरिक रूपमा कमजोर भएको भन्दै अलग हुन चाहेको बताएका थिए । अर्काथरी महिलाहरुले श्रीमानले उमेर पुगेकाहरुले हेर्न मिल्ने फिल्म देखाएर रात्रिकालिन कार्यमा दवाव दिएको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेका थिए ।
अध्ययनमा के खुल्यो भने एक महिलाले विवाह भएको एक वर्षपछि आफ्नो पति शारीरिक रूपमा अशक्त भएको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको बताइन् ।
उनी भन्छिन्, ‘म आफ्नो जीवन एक अयोग्य पतिसँग बिताउन सक्दिन् ।’ सोही समयमा, गाजियाबाद, विजयनगरकी एक महिलाले पतिले उमेर पुगेकाहरुले हेर्न मिल्ने फिल्म हेरेर रात्रिकालिन कार्यका लागि दवाव बनाउने गरेको आरोप लगाउँदै सम्बन्ध विच्छेद माग गरिन् ।
पारिवारिक परामर्श केन्द्रको परामर्शमा महिलाहरु अहिले आफ्ना पतिका बारेमा खुलेर बोलिरहेका छन् । अध्ययनबाट के कुरा खुल्यो भने हाम्रो समाजमा त्यस्ता धेरै महिलाहरु छन्, जो शारीरिक रूपमा अशक्त वा पतिको धेरै इच्छाबाट हैरान भएर सम्बन्ध विच्छेद माग्दैछन् ।
महिलाहरु समाजको मनोवैज्ञानिक दबाबको कारण दाइजो लगायत बहाना बनाएर सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्छन् ।
तर जब परिवार परामर्श केन्द्रका सल्लाहकारहरुसँग उनीहरु सबै विषयमा खुलेर छलफल गर्छन् ।
केन्द्रमा आएका महिलाहरु सम्बन्ध विच्छेदको कारणहरुको बारेमा व्यक्तिगत कुराहरु भन्न हिचकिचाउँदैनन् । महिला प्रहरीद्धारा पनि त्यस्ता घटनाहरुको पुष्टि गरिएको छ ।
श्रीमान बिदेशमा मलाइ से,क्स बिना निन्द्रा नै लाग्दैन के गर्ने होला ?
जहाँ भाडामा गर्लफ्रेन्ड पाइन्छ